Fahadisoana matetika rehefa manoratra taratasy fe-potoana - Victor Mochere
Ny fanoratana taratasim-pitenenana dia misy ny fiakarany sy ny fidinany miaraka amin'ny mpianatra sahirana sy kivy eny an-dalana. Mba hanoratana taratasy fe-potoana dia mila fiheverana, faharetana, fahazotoana ary 15-20 andro, ary mandritra ny volana vitsivitsy mba hiroboka tanteraka amin'ny lohahevitra momba ny asa. Ny gadona maoderina amin'ny fiainana matetika dia tsy mamela ny mpianatra handany 3 herinandro amin'ny asa iray. Ny faniriana handalo haingana ny taranja dia mitarika amin'ny fahadisoana, noho izany dia averimberin'ny mpampianatra izany ho fanitsiana.
Manampy amin'ny famerenana ny fahadisoana mahazatra natao nandritra ny dingan'ny fanoratana mba hanamora ny zavatra. Ny fahafantaranao ireo fandrika mety hitranga alohan'ny hanombohanao ny taratasinao dia mety hanampy anao amin'ny fisorohana azy ireo amim-pahombiazana. Hanala adin-tsaina sy fahasorenana be dia be izany. Avy eo ianao dia afaka manoratra taratasy izay hampiaiky volana ny mpampianatra anao sy ny taratasy izay hireharehanao.
Ireto ny hadisoana mahazatra tokony hialana amin'ny fanoratana taratasy fe-potoana.
1. Mifidy lohahevitra tsy misy dikany
2. Toetran'ny famaritana ny fandalinana
3. Fivavahana amin'ny lohahevitra
4. Fampiasana vaovao efa lany andro
5. Diso safidy ny fomba fanolorana
6. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra
7. Fanararaotana ny plagiarisme
8. Diso endrika
9. Ny tsy fitoviana amin'ny ampahany amin'ny asa
Fidio tsara ny lohahevitry ny fampianarana. Ny ampahany tsy maintsy atao amin'ny fampidirana dia ny fanamafisana ny maha-zava-dehibe azy.
Tokony ho mazava sy mahaliana anao ny lohahevitra. Amin'ny fanamafisana ny maha-zava-dehibe azy dia tokony hojerena ny tsy fahampian'ny fianarana, ny lanjany azo ampiharina, ny fiposahan'ny fomba fikarohana maoderina na ny vaovao vaovao. Mamorona hevitra amin'ny fomba mazava sy fohy ary miezaha hialana amin'ny fitsarana manjavozavo. Ny fanamarinana dia tokony haka ny antsasaky ny takelaka.
Ny asa fampianarana dia mikendry ny famahana olana. Tokony ho famakafakana izy io ary asehoy ny fahaizanao misaina lojika. Tsy azo ekena eto ny sidina fantasy, ny tsy fisian'ny tanjona, ny tsy fitoviana amin'ny ampahany ary ny famaritana ara-javakanto.
Halalino ny soso-kevitry ny boky torolalana ary miresaha amin’ny mpampianatra. Eritrereto ny firafitry ny asa ary mifidiana ny fomba fikarohana mety. Tsarovy fa ny fomba famakafakana dia mitaky fahatakarana lalina momba ny lohahevitra ary ampahany manan-danja amin'ny fianarana. Ampifandraiso amin'ny fomba teorika sy lojika-teorika hafa. Raha takatrao fa tsy azonao ny lohahevitra, dia tsara kokoa ny mifandray amin'ny studio fampahalalana.
Raha tsy azon'ny mpianatra ny lohahevitry ny fampianarana sy ny tanjony, dia tsy manaraka paikady lojika izy ary manoratra izay rehetra mety aminy. Izany dia mitarika amin'ny antsipiriany be loatra, ny fanoratana an-jambany ny zava-misy tsy voamarina ary ny fialana amin'ny lohahevitra voafidy.
Anontanio mialoha ny hevitry ny asanao ny mpampianatra. Manàna faharetana amin'ny fahazoana ny lohahevitry ny taranja ary amboary araka ny lojika ny firafiny.
Noho io hadisoana io dia tsy misy dikany ny asanao.
Andramo ny mampiasa angona avy amin'ny loharano vaovao navoaka tao anatin'ny 3-5 taona farany.
Ny fehezan-teny mahatsikaiky mahatsikaiky, fehintsoratra lava ary fiodinana akademika sarotra dia hiteraka fiantraikany ratsy amin'ny mpanara-maso.
Andramo ny manolotra ny vaovao amin'ny fomba azo idirana. Halaviro ny fitsarana nindramina, ny mpisolo anarana be dia be ary ny fomba fiteny mampisafotofoto. Azonao atao ny miresaka mialoha amin'ny mpampianatra momba ny famelabelarana.
Rehefa manoratra taranja ao anatin'ny fotoana fohy ny mpianatra iray dia tsy misy fotoana hanamarinana ny lesoka gramatika, syntactic, lojika ary hafa. Mandrahona ny hampidina ny isa ny fisian’izy ireo.
Alefaso ny fianarana vita amin'ny alàlan'ny serivisy mamaky teny sy manoratra na manakarama proofreader na angataho ny namanao hanamarina ny fahadisoana. Jereo ny tsipelina ny teny avy amin'ny loharano voadika. Betsaka ny typos sy perla hafa ao amin'ny Internet. Rehefa manafatra amin'ny vidin'ny asa fampianarana dia efa tafiditra ao ny fitsapana.
Ho hitan'ny mpampianatra fa nanangona ny asanao avy amin'ny sangan'asa siantifika nataon'olon-kafa ianao na natokanao tanteraka ny fianarana nataon'olona iray.
Ny plagiarism dia manondro ny tsy fahaizana miasa amin'ny fitaovana. Ny asa fampianarana dia asan'ny mpanoratra ary tsy maintsy miavaka. Avereno avereno ny fampahalalana hita (avereno soratana) ary manaova tsoa-kevitrao manokana.
Mety hiova imbetsaka isan-taona ny fenitry ny famolavolana. Ny haben'ny endri-tsoratra, ny fanoratana marina ny fampidirana sy ny famaranana, ny fampifanarahana, ny filaharan'ny ampahany amin'ny asa, ny fisoratana anarana amin'ny references ary ny lisitry ny literatiora - ilaina ny mahafantatra sy mandinika ny fanirian'ny sekoly ambaratonga faharoa.
Anontanio ny mpampianatra momba ny fepetra rehetra momba ny famolavolana. Raha tsy izany dia mety hahazo taranja ho vita ianao.
Matetika ny mpianatra dia mahita fitaovana be dia be ao amin'ny ampahany iray amin'ny taranja ary kely dia kely amin'ny iray hafa. Vokatr'izany, ny fizarana sasany dia feno antsipiriany be loatra ary ny sasany saika tsy nambara. Ny asa toy izany dia azo inoana fa tsy mahafeno fepetra.
Araho ny drafitry ny fampianarana sy ny fenitry ny fanoratana. Andramo ny manao ny ampahany. Hafohy ny fizarana be be indrindra amin'ny alàlan'ny fanesorana teny sy fehezanteny tsy ilaina. Hanampy ny serivisy hanasarahana ny “fako am-bava” izany.
Ny asa atolotra aorian'ny fe-potoana, ny mpampianatra dia afaka manombana mialoha.
Manaova drafitr'asa ary mifikira amin'izany. Omeo fotoana hanaovana fanitsiana sy fanitsiana. Aza ahemotra ny fanoratana taranja ho an'ny alina farany.
Fantatrao izao ny fahadisoana mahazatra indrindra amin'ny mpianatra ary azonao atao ny misoroka izany. Mitaky fiheverana, faharetana ary faniriana hahatakatra ny lohahevitra ny asa fampianarana.
Dingana mankany amin'ny fiainana tsara kokoa aorian'ny fisaraham-panambadiana
Toerana tsara indrindra hitsidihana amin'ny alàlan'ny sata an'habakabaka